Iindaba -Ivenkile entsha yokuSebenza yeeNgxowa zomchamo
Nge-Epreli 25 ka-2020, iHuaian Medicom Medical Technology Co, Ltd yatyala imali kwivenkile entsha yokusebenza kwebhegi yomchamo. I-Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd yasekwa ngo-2008. Kwiminyaka elishumi elinambini eyadlulayo, i-Huaian Medicom Medical Technology Co, Ltd izimisele ukuba yinkampani yamazwe aphesheya, kwaye ngoku sinayo indawo yokusebenzela.
Kwiworkshop entsha, sathenga oomatshini abatsha saza sababeka kwimveliso. Sinomgca wendibano osengqiqweni. Abasebenzi abahlukeneyo banamacandelo ahlukeneyo emisebenzi, kwaye amacandelo ahlukeneyo emisebenzi aneendibano zocweyo ezahlukeneyo zemveliso, egcina ixesha kwaye iphucula ukusebenza kwemveliso. Indawo yokusebenzela entsha inesithuba esikhulu kunendawo yokusebenzela endala, ukuveliswa kweebhegi zomchamo kulula ngakumbi apha, kwaye abasebenzi banexesha elifanelekileyo lokusebenza. Kunokuthiwa kwiworkshop entsha, kwelinye icala, iyasebenza ngakumbi kwaye ikhululekile kwimveliso.
Emva kokuba umzi-mveliso omtsha weengxowa zomchamo usekwe, ixabiso lesiphumo lifikelela kubude obutsha. Xa kuthelekiswa nokuveliswa kweengxowa zomchamo eziyi-100000 ngenyanga ngo-2010, ngoku iyakwazi ukuvelisa iingxowa zomchamo eziyi-1000000 ngenyanga, ukonyuka kwamaxesha ali-10. Inokuqinisekiswa kwakhona ngumlingane wethu weshishini. UReed uthe: "kuyandothusa nyani, ibhegi yomchamo oyithumela kum ikhawulezile kunangaphambili, kwaye umgangatho ugcinwe kwinqanaba eliphezulu kakhulu".
Elinye ilungu lenza indibano yocweyo uLi Hua uthe: “Indawo yokusebenzela entsha ye-Urine indinika indawo yokusebenza engcono, ndiyazingca ngokuba yinxalenye yeHuaian Medicom Medical Technology.
Injongo yethu yenkampani kuqala, umthengi kuqala, inkonzo yokuqala. Umthengisi osebenza ngexabiso elifanelekileyo yinjongo yethu.
Ixesha Post: Apr-25-2020
Ukufunxa iCatheter, Utywala Pad, Iv Catheter, Ityhubhu yokondla iintsana, Ubungakanani beBlade yoPhando, Ukulungiswa kotywala,